tattoos nke ihe odide edemede, obere ndị dike na akpụkpọ ahụ anyị | Igbu egbugbu
Tattoos nke ihe odide edemede, obere ndị dike na akpụkpọ ahụ anyị
Ejiji egbu egbu mara mma n'ụdị mmadụ niile na-enwe mmasị ịgụ ihe. Mgbe anyị bụ ụmụaka, akụkọ bụ akụkụ nke otito onye anyị, ọ bụ ya kpatara ya ụfọdụ na-agbadoro n'uche anyị n'ụzọ anyị na-agaghị echezọ echezọ.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe odide na akụkọ iji kwurịta, taa kpọmkwem anyị ga-ekwu maka akụkọ atọ. The Little Prince, Little Red ịnyịnya ịnyịnya na Alice na Wonderland.
Ọ bụrụ na ị kpebisiri ike igbu otu akụkụ nke akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ kachasị amasị gị, lee ụfọdụ ihe atụ.
1 Characterdị akara egbu egbu
1.1 Obere Onyeisi:
1.2 Obere Uhie Red Red:
1.3 Alice na Wonderland:
Characterdị akara egbu egbu
Ọ bụ otu n'ime akara egbugbu kachasị aga nke ọma, ọkachasị ụmụ nwanyị ebe ọ bụ agwa dị ụtọ nke ukwuu. Antoine de Saint-Éxupery mere akwa mmiri maka akwụkwọ ahụ n’onwe ya, ma bụrụ ndị dị mfe (adịghị mfe), ha nwere ezi uche. Mana ọ bụghị naanị Onyeisi Nta bụ onye akụkọ a. PoKa anyị nye ya mmetụ dị iche ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ rose, mbara ala ya na ugwu mgbawa ya atọ, nkịta ọhịa ma ọ bụ onye ọ bụla bi na obere obere asteriodes nke onye a na-achọsi ike ịmata onye gafere.
Obere Uhie Red Red:
Onye na-emeghị ihe ọjọọ ma mara mma Little Red Riding Hood onye gbara mbọ ịga naanị ya n'oké ọhịa abụrụla otu n'ime akụkọ ndị ama amas ma ọ bụrụ na anyị gụọ nsụgharị mbụ, ọ bụ otu n'ime ihe kacha akpata oyi. Ekele dịrị Chukwu Perrault wepụrụ ụfọdụ ihe na-adabaghị maka ụmụaka ma ọ bụ ndị okenye ma ụmụnne Grimm mechara dozie ya iji mee ka ọ bụrụ taa, akụkọ ụmụaka.
Igwe na-agba ịnyịnya nke Nikko Hurtado
Ma maka ndị gị na ike gwụrụ ịkpọ ọkpụkpọ, Nwere ike ịgbanye tebụl ma gosipụta na Wolf agaghị enwe nsogbu na Little Red Riding Hood.
Alice na Wonderland:
Ọzọ nke oké akwụkwọ na-adịghị ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị. Enweela ọtụtụ nkwupụta banyere Lewis Carroll, onye edemede nke akwụkwọ akụkọ a, gụnyere ebubo ịbụ Jack the Ripper. Anyị amaghị nke ọma ma ọ kụrụ ọgwụ ike, ọgwụ dị nro, ma ọ bụ gịnị, mana echiche ya enweghị. Ọ bụrụ n’ikpebie igbu egbugbu na akwụkwọ ọgụgụ a, ị nwere ohere na-enweghị ngwụcha. O juputara na odide ndi njirimara ha na ndi mmadu di iche iche, iche n'echiche, ochichiri, otutu. Have nwere ihe atụ nke fodụrụ iji họrọ agwa nke ị kacha mata.
Alice na Wonderland Tattoo
Ọgba ọcha White
Alice na-a meụ m
Cardsgba egwu kaadị
Nke a bụ obere onyinye maka ndị na-achọ ịkọ akụkọ ọzọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Tattoos nke ihe odide edemede, obere ndị dike na akpụkpọ ahụ anyị
Tattoodị Ekele: mee egbugbu ọdịnala North America a
Nkebi ahịrịokwu dị mkpirikpi maka agbamume gị